right speech – Dhammadīpa
Posted on 10 Dec 2016 by Ashin Sopāka
“There are four ways of answering questions-
“One kind is givenacategorical answer,
another is answered after makingadistinction;
to the third, one should raiseacounter-question,
but the fourth should be set aside.
“Whenabhikkhu knows how to answer
each type in the appropriate way,
they say that he is skilled
“He is hard to attack, hard to defeat,
deep, hard to assault;
he is proficient in both
“The wise person avoids what is harmful,
and takes up what is beneficial.
By arriving at what is beneficial,
the steadfast one is said to be wise.” AN 4.42
“Imāni kho, bhikkhave, cattāri pañ­habyā­karaṇā­nīti.
catutthaṁ pana ṭhāpaye.
“Yo ca tesaṁ tattha tattha,
āhu bhikkhuṁ tathāvidhaṁ.
atthaṁ gaṇhāti paṇḍito;
“ရဟန်းတို့ ပြဿနာဖြေဆိုခြင်းတို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်းဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
“ဧကန်ဖြေဆိုရမည့် ပြဿနာသည် တစ်ခု၊ ထို့နောက် ခွဲခြမ်းဝေဖန်၍ ဖြေဆိုရမည့် ဒုတိယပြဿနာ၊ တစ်ဖန် ပြန်မေးရမည့် တတိယပြဿနာ၊ (မဖြေဆိုဘဲ) ထားရ မည့် စတုတ္ထပြဿနာ၊ အကြင် ရဟန်းသည်ကား ထို ထိုသို့သော အရာ၌ ထို ပြဿနာ တို့အားလျော်သော အဖြေကို သိ၏၊ ထိုသို့ သဘောရှိသော ရဟန်းကို အမေး လေးပါး၌ လိမ္မာသော ရဟန်းဟု ဆိုကြကုန်၏။ သူတစ်ပါးတို့ မထိပါး မလွှမ်းမိုး မဖျက်ဆီးနိုင်သော နက်နဲသော ပညာရှိသူသည့်အကျိုးစီးပွါးရှိရာ၌လည်းကောင်း၊ အကျိုးစီးပွါး မရှိရာ၌လည်းကောင်း နှစ်ပါးစုံ၌ လိမ္မာသူ ဖြစ်၏။ ပညာရှိသည် အကျိုးစီးပွါးမဲ့ကို ရှောင်ကြဉ်၏၊ အကျိုးစီးပွါးကို ယူ၏၊ အကျိုး နှစ်ပါးကို သိခြင်းကြောင့် ပညာရှိကို ‘ပဏ္ဍိတ’”။
“Có bốn cách thức để trả lời câu hỏi này.
“Một trả lời nhất hướng,
Bậc Trí minh kiến nghĩa vược gọi là bậc Trí.”
Cattle Egret ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, questions, right speech